Ny GRIMME dia manolotra Mpitantana Teleskopika vaovao roa - Gazety System Potato
в vaovao, Tekinika / teknolojia
Ho an'ny taom-pilalaovana 2022, ny GRIMME dia mampiditra ny SL 900 sy SL 700 andian-tsarimihetsika fehin-kibo teleskopika miaraka amin'ny endrika nohavaozina tanteraka izay manambatra ny vokatra ambony indrindra miaraka amin'ny fahalemem-panahin'ny vokatra tsara indrindra sy ny fikarakarana mora ampiasaina. Ny loaders fehikibo teleskopika dia azo ampiasaina hitahirizana ovy, tongolo, betiravy mena, seleria ary vokatra betsaka hafa.
Ny andiany SL 900 - ny kilasy fanampiny vaovao
Ny andiany SL 900 vaovao dia fanatsarana ny andiany SL 80 efa voaporofo. Raha oharina amin'ny modely teo aloha, ny sakan'ny fehikibo dia nitombo avy amin'ny 800 mm ka hatramin'ny 900 mm. Ankoatr'izay, ny endriky ny tavy amin'ny fehikibo conveyor dia nohatsaraina amin'ny fizarana. Vokatr'izany dia azo tratrarina ny fivoahana ambony kokoa.
Amin'ny habetsaky ny vokatra feno entana dia azo atao ny miasa miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny fehikibo, izay misy fiantraikany tsara amin'ny fikarakarana vokatra malefaka.
Ny andiany SL 900 dia misy modely roa, SL 916 miaraka amin'ny halavan'ny fehin-kibo avy amin'ny 9,7 m ka hatramin'ny 16,5 m ary SL 919 miaraka amin'ny halavan'ny fehin-kibo 11,2 m hatramin'ny 19,5 m. na inona na inona ny zoro savily ny teleskopika fehin-kibo loader. Ho fanampin'izany, ny Quantum Feed Conveyor dia mamela ny taham-pihodinana miakatra hatramin'ny 180 ° ary mampitombo ny fahafaha-mitahiry amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fikorianan'ny vokatra.
Miaraka amin'ny conveyor Quantum loading, mitombo ny halavan'ny fitaterana amin'ny SL 916 ka hatramin'ny 17,7 m ambony indrindra, ary amin'ny SL 919 hatramin'ny 20,7 m ambony indrindra.
Série SL 700 - miaraka amin'ny conveyor Quantum loading ary miasa famenoana fitahirizana manan-tsaina
Ny loader fehin-kibo teleskopika vaovao amin'ny andiany SL 700 dia manana fehin-kibo 66 sm ny sakany ary 16,5 m ny halavany. Ity milina ity dia azo atao ihany koa miaraka amin'ny conveyor Quantum loading. Vokatr'izany, ny halavan'ny fitaterana ambony indrindra dia 17,7 m azo tanterahina.
Ny andiany SL 700 izao dia manana, toa ny andiany SL 900, fiasa famenoana fitahirizana vaovao ary fiasa vaovao intuitive.
Fampiononana bebe kokoa noho ny fiasa famenoana fitahirizana vaovao
Ny loader fehikibo teleskopika vaovao dia manolotra safidy famenoana fitahirizana vaovao telo:
Miaraka amin'ity famenoana famenoana fitahirizana ity dia mamadika ny làlan'ny fihodinana ny loader fehin-kibo teleskopika raha vantany vao hitan'ny sensor optique ao amin'ny undercarriage ny mpiambina fetra malalaka. Ho an'ny contour vokatra mivaingana, ny fotoana famenoana ny vokatra eo amin'ny zoron'ny fitahirizana dia azo amboarina amin'ny tanana.
Ny fiasan'ny famenoana fitahirizana azo ampiasaina StoreMatic-PLUS dia manaiky ny fampiasana sensor ultrasonic eo amin'ny lohan'ny rindrina na ny sakana fitehirizana. Ankoatr'izay, ny automatique dia manoratra lavaka eo amin'ny sisin'ny vokatra ary mameno azy ireo, mampihena ny hafainganam-pandehan'ny savily. Optionally, ny fehikibo loader azo fitaovana amin'ny automatique retraction asa sy
mampiakatra tena ny fehikibo conveyor teleskopika amin'ny teboka fihodinana.
Ity fampivoarana avo lenta ity dia ahitana ny fiasan'ny StoreMatic-BASIC sy StoreMatic-PLUS, izay azo itarina miaraka amin'ny fiasa manan-tsaina fanampiny.
Ny taham-pihodinana ho an'ny havanana sy ankavia dia azo amboarina misaraka sy tsy miankina. Ireo mari-pamantarana ireo dia azo ampifanarahana na dia mandritra ny dingan'ny fametahana vault amin'izao fotoana izao aza amin'ny fampiasana ny fanaraha-maso lavitra CCI 800.
Ankoatr'izay dia misy ny famenoana ny zoron'ny fitehirizana, ny fanovana ny haavon'ny stacking, ary koa ny fampifanarahana tsy tapaka ny haavon'ny fandefasana ary ny fahafahana manitsy ny haavon'ny fitehirizana ambony indrindra.
Miaraka amin'ny StoreMatic-PRO, ny mpampiasa dia omena avy amin'ny orinasa miaraka amin'ny PreSets telo ho an'ny fizotry ny fitehirizana entana: ny fampisehoana ambony indrindra, ny fikarakarana vokatra malefaka indrindra ary ny fampifangaroana tsara indrindra amin'ny fampisehoana avo lenta miaraka amin'ny tahiry avo lenta. Noho ireo preset ireo dia azo atao ny manitsy ny masontsivana ilaina amin'ny loader fehin-kibo teleskopika amin'ny fomba intuitive kokoa.
Ny rafitra fanaraha-maso milina mora takarina dia omen'ny tontolon'ny fanaraha-maso ny CCI 800, izay manome fampisehoana mazava ny angon-drakitra refesina amin'ny alàlan'ny sensor ary koa ny firafitry ny milina.
Azo tehirizina ho toy ny sarin'ny hetsika manondro ny toerana fitahirizana sy ny vokatra ny fika toy ny hafainganam-pandeha, ny taratra fihodinana na ny haavon'ny fitahirizana ary tsaroana rehefa ilaina izany.
Ho an'ny milina rehetra amin'ny teknolojia fitahirizana, ny rafitra fanaraha-maso ny tsipika Flow Control dia atolotra, izay ahafahan'ny mpampiasa manova ny tsipika fitahirizana manontolo amin'ny alina. Ny asa manan-danja indrindra amin'ny loader fehikibo teleskopika dia azo amboarina amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lavitra radio azo atao.
Famolavolana milina compact
Ireo loader fehikibo teleskopika taranaka vaovao dia miavaka amin'ny endrika misokatra sy malefaka miaraka amin'ny counterweights eo amin'ny sisin'ny milina. Izany dia mampihena ny fananganana loto sy loto eo amin'ny ambany fiara ary mampitombo be ny fidirana malalaka amin'ny singa ho an'ny asa fikojakojana. Ny drawbar dia azo aforitra tsara amin'ny sisiny, tsy ilaina ny mandrava azy. Serial, fanitsiana hydraulika avy amin'ny fitaterana mankany amin'ny toeran'ny asa dia atao tsara avy amin'ny tontonana fanaraha-maso.
Tarika orinasa ratsy tarehy
Ny orinasam-pianakaviana GRIMME dia naorina tamin'ny 1861 ho forge ary ankehitriny dia mampiasa olona 2700 mahery eran'izao tontolo izao.
Nandritra ny 80 taona mahery, ny orinasa milina fambolena GRIMME dia namokatra teknolojia ovy, betiravy ary legioma avo lenta, izay ampiasaina any amin'ny firenena 120 mahery eran'izao tontolo izao. Ny GRIMME Group of Companies dia ahitana orinasa ihany koa ASA-LIFT any Danemark, SPUDNIK any Etazonia, INTERNORM ary RICON any Alemaina ary sampana varotra sy serivisy iraisam-pirenena 12.
Tags: ratsy tarehy
Fanavaozana ny GRIMME mandray hoppers (andiany RH)
Fanavaozana isan-karazany no nampiharina nandritra ny fampandrosoana tamin'ny GRIMME nahazo hoppers an'ny andiany RH sy RH Combi. Miankina amin'ny ...
Webinar #GRIMME: Ny haavon'ny fampandehanana ny famokarana ovy any amin'ny firenena samihafa eto amin'izao tontolo izao
Ny 25 Jona, amin'ny 9.00:17.00 maraina EST (XNUMX:XNUMX MSK), hisy webinar GRIMME hotontosaina ao amin'ny tranokalan'ny Kongresin'ny Ovy World, natokana ho ...
Tsy hisy ny fampirantiana GRIMME Technica
Foanana ny fampirantiana GRIMME Technica, izay tokony ho natao hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 4 desambra 2020 tany Damme (Alemana). Ny tena ...
Sergey Dankvert - momba ny ovy tsy misy bibikely, hena misy antibiotika sy ronono, izay tokony ho lasa marikivy
AFG National. Maherin'ny 1500 ha eo ambanin'ny ovy